Mashiinka Nadiifinta Ololka Baradhada Mishiinka Goynta Tuber - Wargeyska Nidaamka Baradhada
в Agrotechnology, Wararka adduunka, Sayniska, News, Isbeddellada / Isbeddellada, Injineerinka / Teknolojiyada
Mashiinka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa xal macquul ah si loo yareeyo faafitaanka cudurka inta lagu jiro jarida tubers abuurka.
Baradhadu si daaqsin ah ayaa loo faafiyaa, jarista digriiga abuurku waa dhaqan caadi ah oo ay raacaan beeralayda si ay u kordhiyaan helitaanka abuurka beeritaanka. Si kastaba ha noqotee, dhaqankani wuxuu keenayaa khatarta gudbinta farsamada ee cudurrada ay keenaan bakteeriyada qaarkood, fungal iyo fayraska. Tusaale ahaan, qudhunka bakteeriyadu waa cudur aan lahayn iska caabin eber ah oo faafitaanka cudurku wuxuu dhici karaa inta lagu jiro hawlgallada jarista tuberka abuurka.
Wax-soo-saarayaashu hadda waxay jeermisiyaan qalabka abuurka abuurka inta u dhaxaysa abuur fara badan iyagoo isticmaalaya koloriin ama xeryahooda ammonium quaternary. Iyadoo dhaqankani yahay mid waxtar u leh xakamaynta faafitaanka cudurka inta u dhaxaysa abuur fara badan, waxaa jira khatar joogto ah oo cudur la isugu gudbiyo marka digriiga la gooyo.
Tyler Thompson (Maareeyihii hore ee Beeraha ee Xarunta Cilmi-baarista ee San Louis Valley) wuxuu la shaqeeyay Ronald Price (Farsamo-yaqaan Beereed oo ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista ee San Louis Valley) si uu u horumariyo Mashiinka Goynta Tuber Iniinta Baradhada.
Fikradda aasaasiga ah ee ikhtiraacidani waxay ku lug leedahay kululaynta saxannada abuurka abuur (adiga oo isticmaalaya isku dhafka shidaalka acetylene iyo hawo cadaadis leh) ilaa 250 ° F si wax ku ool ah loo dilo dhammaan cudurada, taas oo xaddidaysa faafitaanka cudurka. Codsiga rukhsadda leh ee qeexaya farsamadan cusub ayaa sidoo kale lagu xareeyay CSUVentures.
Barnaamijka Cilmi-baarista Dhirta, oo uu hoggaamiyo Dr. Chakradhar Mattupalli oo ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista ee San Luis Valley, ayaa hadda wadda cilmi-baaris si ay u muujiso waxtarka mashiinkan si loo yareeyo faafitaanka cudurrada bakteeriyada iyo fayraska ee dhici kara inta lagu jiro hawlaha jarista abuurka. Natiijooyinka hordhaca ah waa kuwo dhiirigelinaya waxaana socda tijaabooyin goos goos ah ka dib.
Tags: khudbadomashiinka goyntabaradhada abuurCilmi-baarista Maraykanka
Sanadkan, aagga baradhada waxaa lagu kordhin doonaa 128% gobolka Smolensk iyo 1,5 jeer khudaar badan ayaa la beeri doonaa.
Corteva Agriscience ayaa bixin doonta deeqo mashruuc loogu talagalay horumarinta howlaha beeraha iyadoo saameyn wanaagsan ku leh cimilada